လူငယ်များအတွက်လေ့လာမှု - ED ၃၁%၊ လိင်စိတ်နည်းခြင်း ၃၇% ရှိသော်လည်း၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံသည်ညစ်ညမ်းမှုမဖြစ်နိုင်ပါ (Landripet & Stulhofer, 31) ကိုဝေဖန်ခြင်း - သင်၏ ဦး နှောက်ပေါ်
UPDATE 1: ဤစာတမ်း၏သက်တူရွယ်တူပြန်လည်သုံးသပ်ဝေဖန်မှုများ - အပေါ်မှတ်ချက်: Younger လိင်ကွဲအမျိုးသားများအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲများနှင့်အလုပ်မဖြစ်နှင့်အတူညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှု Associated Is? Gert မာတင် Hald, Ph.D အားဖြင့်
UPDATE 2015: Landripet & Stulhofer ၏စာတမ်းတွင်သူတို့တင်ပြသောထင်ရှားသောဆက်စပ်မှုသုံးခုကိုချန်လှပ်ထားသည် ဥရောပညီလာခံ (သူတို့ရဲ့စိတ္တဇထံမှကောက်နှုတ်ချက်):
တစ်အစီရင်ခံ တိကျတဲ့ညစ်ညမ်းအမျိုးအစားများများအတွက် preference ကိုသိသိသာသာ erectile နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည် (သို့သော် ejaculatory သို့မဟုတ်အလိုဆန္ဒ-related မဟုတ်) အထီး လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု.
တိုးမြှင့် ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု အနည်းငယ်ဖြစ်ခဲ့သည်ပေမယ့် သိသိသာသာပူးပေါင်းလိင်နှင့်အမျိုးသမီးအကြားပိုပြီးပျံ့နှံ့နေတဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုများအတွက်လျော့နည်းသွားအကျိုးစီးပွားနှင့်ဆက်စပ်။
UPDATE 2016: (သြဂုတ်၊ ၂၀၁၆) အမေရိကန်ရေတပ်ဆရာဝန် ၇ ဦး ပါ ၀ င်သောအုပ်စုတူအဆင့်တူပြန်လည်သုံးသပ်သည့်စာတမ်း - အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်စေသလဲ? လက်တွေ့အစီရင်ခံစာများနှင့်အတူတစ်ဦးကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း (2016) - ဒါဟာ porn-သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများအပေါ်စာပေတစ်ခုကျယ်ပြန့်သုံးသပ်မှုပါပဲ။ အဆိုပါသုံးသပ်ချက်ကိုနုပျိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများအတွက်ကြီးမားတဲ့မြင့်တက်ထုတ်ဖော်နောက်ဆုံးပေါ် data တွေကိုပေးပါသည်။ အဆိုပါစက္ကူကိုလည်းညစ်ညမ်းစွဲများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအေးစက်ဆိုင်ရာအာရုံကြောလေ့လာမှုများကို examine ။ အဆိုပါဆရာဝန်များက porn-သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်ဖွံ့ဖြိုးသောလူတို့၏3လက်တွေ့အစီရင်ခံစာများသည်။ အဆိုပါစက္ကူလည်းဝေဖန်မှု Landripet & Stulhofer, 2015 ။
UPDATE 2019: အစောပိုင်း 2019 ၏အဖြစ်, လေ့လာမှု ၁၁၀ နီးပါးသည်ညစ်ညမ်းသောလိင်မှုကိစ္စနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျင့်ပျက်မှုနှင့်လိင်မှုကိစ္စပြုခြင်းကိုလိင်ဆက်ဆံမှုမှနှိုးဆွခြင်း၊ သင်တန်းသားများကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုဖယ်ရှားပစ်ခြင်းနှင့်နာတာရှည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်အနာကိုငြိမ်းစေအဖြစ်ဤစာရင်းထဲတွင်ပထမဦးဆုံး6လေ့လာမှုများ causation ဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။
UPDATE 2019သူသည်တိတ်ဆိတ်ဖို့ကြိုးစားနေအတွက်မဟာမိတ်များနီကိုးလ် Prause, ဒါဝိဒ်သည် Ley နှင့်အခြားသူများပူးပေါင်းတဲ့အခါမှာအလက်ဇန်းဒါးŠtulhoferသည်သူ၏အစွန်းရောက်အစီအစဉ်-မောင်းနှင်ဘက်လိုက်မှုကိုအတည်ပြု YourBrainOnPorn.com။ Štulhoferနှင့် www.realyourbrainonporn.com မှာအခြားအလိုလားသူ porn "ကျွမ်းကျင်သူများက" အတွက်စေ့စပ်နေကြတယ် တရားမဝင်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ချိုးဖောက်မှုနှင့်ကီထိုင်. Štulhofer တစ်ဦးကိုစေလွှတ်အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးနှင့်ရပ်တန့်အက္ခရာခဲ့သည်။ ဥပဒေရေးရာလုပ်ရပ်များကို လိုက်. ခံရဖို့ဆက်လက်။
ဤသည်၏အဖြစ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖြစ်ပါသည် ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှု Associated Younger လိင်ကွဲအမျိုးသားများအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲများနှင့်အလုပ်မဖြစ်နှင့်အတူဖြစ်သနည်း (ကအကျဉ်းဆက်သွယ်ရေး) Landripet ငါŠtulhoferအေနေဖြင့်
ပြBနာ ၁ - လေ့လာမှုကမယုံနိုင်လောက်အောင်မြင့်မားသော ED နှုန်းနှင့်လိင်ဆန္ဒပြင်းပြမှုနည်းသည်
ရှိပြီးသားဒေတာဘေ့စ်တစ်စုံကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်သည့်ဤရိုးရှင်းသောအပိုင်းကဏ္ study လေ့လာမှုတွင် ED နှုန်းသည် ၃၁% အထိမြင့်မားပြီး၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒနိမ့်ကျမှုနှုန်းမှာအမျိုးသား ၁၈-၄၀ တွင် ၃၇% အထိမြင့်တက်ခဲ့သည်။ သို့သျောလညျးခေါင်းစဉ်နှင့်စိတ္တဇဤတွေ့ရှိချက်များမဖော်ပြထားခြင်း။ အဲဒီအစားစာရေးသူတွေကလူငယ်တွေမှာ ED ကပ်ရောဂါကူးစက်မှုကိုအသိအမှတ်ပြုထားပေမယ့်“ ဒါဟာညစ်ညမ်းမှုမဟုတ်ဘူး” လို့ကျွန်တော်တို့ကိုစိတ်ချစေတယ်။
"အကြီးစား epidemiological လေ့လာမှုအတော်များများကမကြာသေးမီကလူငယ်များကြားတွင် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု (ED) ပျံ့နှံ့နေသည်ဟုညွှန်ပြခဲ့သည်။ "
တစ်ဦး 2011 မေးခွန်းလွှာများနှင့် 2014 မှအခြားပေါ်တွင်အခြေခံသည့်လေ့လာမှုအသစ်အတွက်လူပျိုတို့အတွက်ပညာရေးနှုန်းထားများအဘယျသို့ရှိသနည်း
“ လေ့လာမှု ၁ မှာ၊ 14.2-28.3% သင်တန်းသားများကို ED ကိုအစီရင်ခံတင်ပြ (2011)
“ လေ့လာမှု ၁ မှာ၊ 30.8% အမျိုးသားများတွင် ED ရှိသူများအဖြစ်သတ်မှတ်ခံရသည် (၂၀၁၄)
ပင် 2011 စစ်တမ်းနှင့် 2014 စစ်တမ်းများအကြားပညာရေးနှုန်းထားများအတွက်ဆက်လက်မြင့်တက်သတိပြုပါ။ နောက်ကျော 2004 အတွက်, Stulhofer ရဲ့သုတေသန ယောက်ျား 35-39 အတွက် ED နှုန်းထားများသာ 5.8% ဖြစ်ကြောင်းကိုပြသ!
ဒီလေ့လာမှုကတွေ့ရှိခဲ့လူပျိုတို့အတွက် unexplained ED ၏တူညီသောအလွန့်အလွန်မြင့်မားတဲ့နှုန်းကိုတွေ့ အခြားလေ့လာမှုများအတွက်။ အင်တာနက်ကိုမရောက်မီ ED နှုန်းထားများအဘယျသို့ရှိသနည်း Kinsey (1948) ယောက်ျား3နှင့်အောက်တွင်ထက်နည်း 40% 1 အောက်တွင်လူတို့သညျအဘို့အ ED ၏နှုန်းနှင့်အထက်နည်း 19% ကဖော်ပြခဲ့သည်။ အဆိုပါ အမေရိကန်အမျိုးသားများတွင် ED နှုန်းထားများ၏ Cross-Section လေ့လာမှုသာ ယောက်ျားအသက်အရွယ် 5-18 အတွက် ED တစ် 59% နှုန်းကိုရှင်းလင်းတင်ပြသည်။ ဤသည် 1992 ကနေဒေတာတွေကိုအပျေါအခွခေံ, နှင့်ယောက်ျား၏သုံးပုံတစ်ပုံခဲ့ကြသည်ခဲ့သည် ကျော်လွန် 40 ။ အလားတူပင်တစ်ဦး 2002 Meta-analysis သည် ဒတ်ခ်ျသုတေသီများ6လေ့လာမှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကြောင်းအစီရင်ခံအသုံးပြုပုံ540 အောက်တွင်လူတို့သညျအဘို့အ ED နှုန်းထားများခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 2% ခဲ့ကြသည်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အခြားတဦးတည်း 9% ၏နှုန်းထားများသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ပထမစစ်တမ်းတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒနိမ့်မှုနှုန်းသည်စိုးရိမ်ဖွယ်ရာဖြစ်ကြောင်းသတိပြုပါ 16.3% မှ 37.4%။ ဘယ်လိုလုလင်နီးပါး 40% အနိမ့်လိင်စိတ်ရှိနိုငျမလဲ ထိုသို့သောမြင့်မားတဲ့နှုန်းတစ်ခုသာအနည်းငယ်တိုတောင်းလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကြားဖူးခဲ့ကြသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, 2004 အတွက်, အီတလီဆီးရောဂါပါရဂူ Carlo Foresta တွေ့ရှိခဲ့ ဆယ်ကျော်သက်သာ 1.7% ၏အနိမ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ-အလိုဆန္ဒနှုန်းထားများ။ သို့သော်နှုန်းထားများ 600 ဖွငျ့% 10.3 မှ 2012% ခုန်တက်ခဲ့သည်။
အဓိကအချက် - လွန်ခဲ့သောအနှစ် ၂၀ အတွင်းအသက် ၄၀ နှစ်အောက်အမျိုးသားများ၏ ED နှုန်းသည်အနည်းဆုံး ၆၀၀% တိုးတက်ခဲ့ပြီးလေ့လာမှု၏စာရေးသူများကမူညစ်ညမ်းမှုမှာအကြောင်းပြချက်မဟုတ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ လွန်ခဲ့သော ၁၅-၂၀ နှစ်အတွင်းအခြားမည်သည့်ပြောင်းလဲမှုကိုအခြေခံကျကျပြောင်းလဲခဲ့သနည်း။
ပြဿနာ 2: အကဲဖြတ်တစ်ခုတည်းသော variable ကိုပြီးခဲ့သည့် 12 လအတွင်းအသုံးပြုမှုကြိမ်နှုန်းခဲ့သည်
Self-အစီရင်ခံ: အဆိုပါစာရေးဆရာသာအားလုံးဘာသာရပ်များကိုဖြတ်ပြီး porn အသုံးပြုမှုနှင့်ပတ်သက်သောတဦးတည်း variable ကိုအကဲဖြတ်ရန် အသုံးပြုမှုအကြိမ်ရေ အဆိုပါကျော် (အသုံးပြုမှုမဟုတ်နာရီ) နောက်ဆုံး 12 လ။ ဒီကန့်သတ်အတိုင်းအတာနှင့်အတူတော်တော်များများပြဿနာတွေရှိပါတယ်:
အသုံးပြုမှု frequency မျှတစ်ပတ်ကိုနာရီကြားဆက်ဆံရေး, ကုန်အံ့တစ်ဦးတည်းအသုံးပြုမှုအမျိုးမျိုးကတခြား, ပိုမိုသက်ဆိုင်ရာ, variable တွေကိုရှိစေခြင်းငှါ
ဒါဟာမတိုင်မီနောက်ဆုံး 12 လအတွင်းဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်. ဘာမျှမပြောထားပါသည်
ဒါဟာတစ်သက်တာကျော်ကျွန်တော်တို့ကိုစုစုပေါင်း porn အသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်. ဘာမျှမပြောထားပါသည်
အဆိုပါစာရေးဆရာ, သူတို့ရဲ့ Cross-Section လေ့လာမှုမှာသူတို့အသုံးပြုတဲ့မေးခှနျးတှေကိုသုံးပြီးကြောင်းကောက်ချက်ချ, porn ၏ကြိမ်နှုန်းလုလင်တို့သည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်ဖွံ့ဖြိုးပြီးသောဆုံးဖြတ်သည်ကြောင်းအနည်းငယ်သာသက်သေအထောက်အထားရှိပါတယ်။ ဤရလဒ်လုံးဝအံ့သြစရာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ တကယ်တော့, ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဖိုရမ်များအပေါ် စုပေါင်း. အသုံးအများဆုံးမေးခွန်းများကိုတစ်ဦးဖြစ်ပါသည်, ကျွန်ုပ်၏သူငယ်ချင်းများသည်ငါထက်များသော (သို့မဟုတ်ထိုထက်မက) အပြာများကိုကြည့်သည့်အခါငါဘာကြောင့် PIED ကိုတီထွင်ခဲ့တာလဲ။
အဲဒီအစားသုံးစွဲခြင်း၏ကြိမ်နှုန်း၏, variable တွေကိုပေါင်းစပ် porn-သွေးဆောင် ED တွင်ပါဝင်ပတ်သက်ခံရဖို့ပေါ်လာပါသည်။ ဤရွေ့ကားများပါဝင်သည်:
အသက်အရွယ်တသမတ်တည်း porn အသုံးပြုမှုစတင်
porn စွဲ / hypersexuality ၏ရောက်ရှိခြင်း
တခြားဘာအင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုရှုထောင့်ပိုကောင်းတဲ့ညစ်ညမ်း-related လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်ရှင်းပြစျနိုငျသလဲ ဂျာမန်သုတေသီတွေက ပလီကေးရှင်း arousal နှင့်အရေအတွက်ပြင်းထန်မှုအချိန်မဟုတ်ခဲ့စောင့်ကြည့်နေခဲ့ရသည်နေစဉ်, porn-related ပြဿနာများနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်ဖွင့်လှစ်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
ရလဒ်များအွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများနှင့်ဆက်စပ်နေ့စဉ်အသက်တာ၌ Self-အစီရင်ခံပြဿနာများအားဖြင့်ဟောကိန်းထုတ်ခဲ့ကြသည်ညွှန်ပြ ပုဂ္ဂလဒိဋ္လိင်စိတ်နိုးထ ratings အဆိုပါညစ်ညမ်းပစ္စည်း, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါလက္ခဏာများ၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပြင်းထန်မှု, နှင့် နေ့စဉ်အသက်တာ၌အင်တာနက်ကိုလိင်က်ဘ်ဆိုက်များပေါ်တွင်ဖြစ်ခြင်းလာသောအခါလိင် applications များ၏နံပါတ်အသုံးပြုသော, အင်တာနက်လိင်က်ဘ်ဆိုက်များ (တစ်နေ့လျှင်မိနစ်) ရက်နေ့တွင်သုံးစွဲအချိန်ကိုသိသိသာသာ IATsex ရမှတ်အတွက်ကှဲလှဲ၏ရှင်းပြချက်ကိုအထောက်အကူဖြစ်စေမပြုခဲ့နေစဉ်။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရှုထောငျ့သိသိသာသာ IATsex ရမှတ်ဆက်နွယ်နေကြောင်းမခံခဲ့ရပါ။ [အလေးပေးထည့်သွင်း]
တင်ရန်, ဂျာမန် porn ကိုစောင့်ကြည့်နေခဲ့ရသည်ထိုကာလဖြစ်ခဲ့သည်ကိုတွေ့ မဟုတ် porn စွဲသို့မဟုတ်အသုံးပြုခြင်း၏အနုတ်လက္ခဏာအကျိုးဆက်များဖြစ်စေတစ်အချက်။ ထိုအစား၎င်းသည်လျှောက်လွှာအရေအတွက် (အမျိုးအစားများ) နှင့် porn အသုံးပြုမှုအပေါ်လူတစ် ဦး ၏တုန့်ပြန်မှုကခြားနားမှုဖြစ်စေသည်။ ဆိုလိုသည်မှာအသစ်အဆန်းနှင့်ပိုမိုနှိုးဆွမှုလိုအပ်သည်။ အလားတူပင် အင်တာနက်ဗီဒီယိုဂိမ်းအားဖြင့်အသုံးပြုမှုနာရီ ထို့အပြင်ပြဿနာများကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းကြဘူး။ အဲဒီအစား, ဂိမ်းများအတွက်စိတ်ရင်းနှင့်စိတ်ကိုလွှမ်းမိုးစိတ်အားထက်သန်ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်ဖြစ်ကြသည်။
တိုတိုပြောရရင်, အင်တာနက်အသုံးပြုမှုနှင့်အတူပြဿနာများကိုဖော်ထုတ်ဘို့စံအသုံးပြုမှုနာရီ / ကြိမ်နှုန်းထက်ပိုမိုကျယ်ပြန်ဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဤသည်မှာဤနေရာတွင်ဆွေးနွေးနေသော“ အတိုချုပ်ဆက်သွယ်ရေး” ၏အသုံးဝင်မှုနှင့်နိဂုံးချုပ်မှုအပေါ်သံသယဖြစ်စေသည်။ ဒိန်းမတ် porn သုတေသီ Gert Martin Hald ၏အယ်ဒီတာအဖွဲ့မှတ်ချက်များ ပြီးခဲ့သည့် 12 လအတွင်းတစ်ပတ်ကိုရုံကြိမ်နှုန်းထက်ပိုမို variable တွေကို (ပြုပြီ, မော်ဒ) အကဲဖြတ်ရန်ရန်လိုအပ်ကြောင်းသံယောင်:
တတိယအချက်လေ့လာမှုကိုလေ့လာဆက်ဆံရေး၏ဖြစ်နိုင်သောမော်ဒသို့မဟုတ်ပြုပြီဖြေရှင်းပါဘူးမဟုတ်သလိုကြောင့်ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်ဆုံးဖြတ်ရန်နိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ ပို. ပို. , ညစ်ညမ်းအပေါ်သုတေသနပြုခြင်း, အာရုံစူးစိုက်မှုဆက်ဆံရေး၏ပြင်းအားသို့မဟုတ်ဦးတည်ချက်တွေဖြစ်တဲ့သြဇာလွှမ်းမိုးမှု (ဆိုလိုသည်မှာပြုပြီ) အကြောင်းကိုမဝင်စေခြင်းငှါအရာမှတဆင့် (ဆိုလိုသည်မှာ, မော်ဒ) အဖြစ်လမ်းကြောင်းလေ့လာခဲ့သြဇာလွှမ်းမိုးစေခြင်းငှါအချက်များအားပေးပြီးမှဖြစ်ပါတယ်။ ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲများအပေါ်အနာဂတ်လေ့လာမှုများကိုလည်းထိုကဲ့သို့သောအာရုံစူးစိုက်တစ်ခုပါဝင်မှအကျိုးဖြစ်နိုင်တယ်။
အောက်ခြေလိုင်း: အားလုံးရှုပ်ထွေးပြီးဆေးဘက်ဆိုင်ရာအခြေအနေများဆိတ်ကွယ်ရာ teased ရမည်ဖြစ်သည့်မျိုးစုံအချက်များပါဝငျသညျ။ ဘယ်ကိစ္စမဆို, စာရေးသူ၏ကြေညာချက်သည် "ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသည်ငယ်ရွယ်သောအမျိုးသားများ၏အလိုဆန္ဒ၊" အသုံးပြုသူအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ပြဿနာများဖြစ်ပေါ်စေမည်အကြောင်းတည်း porn အသုံးပြုမှုနှင့်ပတ်သက်သောအပေါငျးတို့သညျအခွားဖြစ်နိုင်သော variable တွေကိုလျစ်လျူရှုပြီးကတည်းက, မထောက်ပံ့ဖြစ်ပါသည်။ ခင်မှာစိတ်ချလက်ချတဦးတည်းနေတုန်းပဲနုပျို ED နှင့်အနိမ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒအတွက်အလွန်မကြာသေးမီ, အံ့သြမြင့်တက်ကွာရှင်းပြရန်လိုအပ်ကြောင်း, ငါတို့အင်တာနက်ညစ်ညမ်းထံမှစိုးရိမ်ပူပန်ဖို့ဘာမျှမရှိသည်ဟုဆိုကာ။
ပြBနာ ၃။ လွန်ခဲ့သော ၁၂ လကလိင်ဆက်ဆံမှုမပြုခဲ့သောအပျိုများနှင့်ယောက်ျားများကိုလေ့လာခြင်း
ညစ်ညမ်းသော ED ရောဂါကူးစက်ခံရသည့်လူ ဦး ရေ ၂ ဦး၊ လိင်မဆက်ဆံသောအပျိုများနှင့်ယောက်ျားများသည်စစ်တမ်းမှဖယ်ထုတ်ခံခဲ့ရသည်။ PIED ရှိအမျိုးသားများအနေဖြင့် ၄ င်းတို့သည်အပျိုကညာများအဖြစ်ကျန်ရှိနေသေးသည်ကိုမပြောနိုင်ပါ။ လိင်မှုဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံရှိအမျိုးသားများစွာက PIED ကြောင့်လိင်ဆက်ဆံမှုမပြုတော့ဟုပြောကြသည်။
တစ်နည်းဆိုရသော်ဤစစ်တမ်းသည်လွန်ခဲ့သောတစ်နှစ်နီးပါးကလိင်ဆက်ဆံခဲ့ကြသောယောက်ျားများတွင် ED အသစ်ကိုမရွေးနိုင်ပါ။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကလိင်မဆက်ဆံသူများ၊ အထွတ်အထိပ်သို့အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုကိုအများဆုံးအသုံးပြုသူများ၊ အပျိုစင်များအနေဖြင့်ညစ်ညမ်းခြင်းမရှိဘဲ၎င်းကိုမရရှိနိုင်သူများအတွက်လည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုများကိုလည်းသူကကောက်ယူလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ဤလူများကိုထည့်သွင်းရန် (အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုမရှိဘဲတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေနိုင်ခြင်းရှိမရှိမေးမြန်းလျှင်) ၎င်းသည်လိင်မှုဆိုင်ရာအနိမ့်အမြင့်နှင့်လိင်သုံးစွဲမှုအကြားဆက်စပ်မှုပေါ်ပေါက်လာနိုင်သည်။
ပြဿနာ 4: အဆိုပါလေ့လာမှုအမှန်တကယ် ED နှင့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအကြားအနည်းငယ်ဆက်စပ်မှုကိုတွေ့ရှိခဲ့
ပေါ်တူဂီအမျိုးသား ၄၀% သာ porn ကိုမကြာခဏသုံးလေ့ရှိပြီးနော်ဝေလူမျိုး ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းသည် porn ကိုမကြာခဏအသုံးပြုကြသည်။ အဆိုပါပေါ်တူဂီလူတို့သညျနော်ဝေထက်ဝေးလျော့နည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုရှိခဲ့ပါတယ်။
တခြားနေရာက, စာရေးဆရာများကိုပိုပြီးမကြာခဏ porn အသုံးပြုခြင်းနှင့်ပညာရေးအကြားတစ်ဦးကစာရင်းအင်းသိသိသာသာအသင်းအဖွဲ့ဝန်ခံပေမယ့်အကျိုးသက်ရောက်မှုရဲ့အရွယ်အစားသေးငယ်တဲ့ဖြစ်ခဲ့သည်ဟုဆိုကြသည်။ သို့သော်ဤပြောဆိုချက်ကိုလိမ္မာစာရငျးအငျးပညာသည်နှင့်များစွာသောလေ့လာမှုတွေရေးသားခဲ့သူတစ်ဦးက MD အဆိုအရလှည့်စားစေခြင်းငှါ:
အဆိုပါစာရေးဆရာကဒီတွေ့ရှိချက်ကိုချွတ်မှုတ်နဲ့သူတို့ရဲ့ကောက်ချက်ရောက်ရှိဖို့အတွက်ကြောင့်လျစ်လျူရှုပေမယ့်အတွက် Gert Martin Hald ၏တရားဝင်မှတ်ချက်များ လေ့လာမှုအကြောင်းကိုသူ says:
သို့သော်ညစ်ညမ်းသုတေသနအတွက်, "အရွယ်အစား" ၏အနက်ကိုရလဒ်ကို၏သဘောသဘာဝအပေါ်သလောက်ရှာတွေ့ဆက်ဆံရေး၏ပြင်းအားအဖြစ်ကိုလေ့လာမူတည်လိမ့်မည်။ ရလဒ် (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြင်းထန်တဲ့အပြုအမူတွေ, ဥပမာ) "လုံလုံလောက်လောက်ဆိုးရွားသော" စဉ်းစားရန်ဖြစ်ပါသည်လျှင်အပင်သေးငယ်တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုအရွယ်အစား  စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာလူမှုရေးနှင့်လက်တွေ့အရေးပါမှုကိုသယ်ဆောင်စေနိုင်သည်။
Landripet နှင့် Stulhofer သူတို့မှပေးအပ်ထားတဲ့3ဆက်စပ်မှုချန်လှပ် ဥရောပညီလာခံ:
တိကျတဲ့ညစ်ညမ်းအမျိုးအစားများများအတွက် preference ကိုအစီရင်ခံသိသိသာသာ erectile နှင့်ဆက်စပ်ပေမယ့် ejaculatory သို့မဟုတ်အလိုဆန္ဒ-related အထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုမခံခဲ့ရပါ။
Landripet & Stulhofer သည် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်၎င်းတို့၏စာတမ်းမှညစ်ညမ်းသောအမျိုးအစားများအတွက် ဦး စားပေးမှုများအကြားအလွန်သိသာသောဆက်နွယ်မှုကိုချန်လှပ်ရန်ရွေးချယ်ခဲ့သည်ကိုအတော်လေးပြောနေသည်။ ညစ်ညမ်းသောသုံးစွဲသူများသည်မူလလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရသာနှင့်မကိုက်ညီသောအမျိုးအစားများသို့ကူးစက်ခြင်းနှင့်ပုံမှန်အားဖြင့်လိင်မှုကိစ္စနှင့်မကိုက်ညီသောညစ်ညမ်းသောအကြိုက်များက ED ကိုတွေ့ရလေ့ရှိသည်။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း porn အသုံးပြုမှုနှင့်သက်ဆိုင်သောအမျိုးမျိုးသောပြောင်းလဲမှုများကိုအကဲဖြတ်ရန်အလွန်အရေးကြီးသည် - ပြီးခဲ့သည့်လကနာရီများသို့မဟုတ်လွန်ခဲ့သောနှစ်များအတွင်းအကြိမ်ရေ။
ပြဿနာ 5: ED အတွက် 600% -1000% တိုးလာဟုဆိုသည်အခြားအချက်များအားဖြင့်ရှင်းပြခဲ့နိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်ဘယ်လိုစာရေးဆရာများ 40 အောက်မှာအမျိုးသားများတွင်လက်ရှိပညာရေးကပ်ရောဂါရှင်းပြသလဲ? သူတို့ကကပ်ရောဂါအင်တာနက်မတိုင်မီတည်ရှိသောသူမူအတူတူပင်အဟောင်းအချက်များထဲကပေါ်ထွန်းရမယ်အကြံပြုအပ်ပါသည်။
"epidemiological လေ့လာမှုများကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်တဲ့လူနေမှု, ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှု, စိတ်ဖိစီးမှု, စိတ်ကျရောဂါ, ရငျးနှီးလိုငွေပြမှုနှင့်လိင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းမှားညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုထက်အထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်နောက်ကွယ်မှပိုပြီးအချက်များဖြစ်ကြောင်းအကြံပြု။ "
အဆိုပါစာရေးဆရာရိုးရှင်းစွာသူတို့သည်သမိုင်းဆိုင်ရာအချက်ဖြစ်ကြောင်း, သို့သော်ဤနိဂုံးချုပ်မျိုရန်ခက်ခဲကြောင့်ဆေးလိပ်မသောက်, လေ့ကျင့်ခန်းမရှိခြင်းနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု, အချက်များဖြစ်နိုင်ပါသည်အကြံပြုကြောင်းအစောပိုင်းလေ့လာမှုများကိုးကားထားပါသည်။
ပထမဦးစွာဆေးလိပ်, အဝလွန်ခြင်း, ဆီးချိုရောဂါများနှင့်စစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းများမရှိခြင်းသည်လုလင်များအတွက်အဓိကအချက်များမရှိကြပေ။ ဤအနှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါသို့မဟုတ်အာရုံကြောကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ပုံစံ, အော်ဂဲနစ် ED အဖြစ်ထင်ရှားစွာပြရန်အဘို့အဒါဟာနှစ်ပေါင်းကြာပါသည်။ ထိုမှတပါး, ဆေးလိပ်သောက်နှုန်းအကြီးအကျယ်ကနောက်ဆုံး 30 နှစ်များတွင်ငြင်းဆန်ခဲ့ကြခြင်း, မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်လေ့ကျင့်ခန်းနှုန်းထားများ၏အသုံးပြုမှုကိုမကြာသေးမီနှစ်အတွင်းမှန်မှန်ကျင်းပခဲ့ကြသည်။ အဝလွန်ခြင်းနှုန်းထားများသာနောက်ဆုံး4နှစ်အတွင်း 15% တိုးပွားလာပါပြီ။
သို့သော်“ လိင်ဆိုင်ရာလိင်ဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များ” နှင့်“ ရင်းနှီးသောလိုငွေပြမှုများ” သည် ED တွင်အဓိကအခန်းကဏ္ playing မှပါ ၀ င်နေသည်ဟူသောပြောဆိုချက်နှင့် ပတ်သက်၍ ကော။ ရိုးရှင်းစွာဖန်တီးမှုအရေးအသားအတွက်လေ့ကျင့်ခန်း, လေထဲကဆွဲထုတ်။
အဘယ်ကြောင့်စာရေးသူ link တစ်ခု porn အသုံးပြုခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုအထောက်အထားဖေါ်ပြခြင်းသုတေသနကိုလျစ်လျူရှုကြသနည်း ကင်းဘရစ်တက္ကသိုလ်ကဥပမာ, သူတို့ရဲ့ porn-စွဲဘာသာရပ်များ၏ 60% စိုက်ထူခြင်းနှင့်စစ်မှန်သောဖက်များနှင့်အတူ, ဒါပေမယ့်မရ porn နှင့်အတူအလိုဆန္ဒနှင့်အတူပြဿနာများရှိခဲ့ကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ဤသည်၌ 2014 ကိစ္စတွင်လေ့လာမှု အနိမ့်လိင်စိတ်နှင့် anorgasmia နှင့်အတူလူတ 8 လကြာ porn ဖျက်သိမ်းရေးဖြင့်သူ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှစ်ဦးစလုံးအလုပ်မဖြစ်အနာကိုငြိမ်းစေ။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ၁၉၉၂ ခုနှစ်မှစ၍ လိင်ပြောင်းလဲမှုကိုလွှမ်းမိုးသောမည်သည့်အဓိကပြောင်းလဲမှုတစ်ခုရှိခဲ့သနည်း? ငါမှန်းကြည့်ရအောင် - အင်တာနက်ညစ်ညမ်း.